Music Strobe: Led + Color Flashing Lights Show. 4.11 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.11 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖေရး Music Strobe: Led + Color Flashing Lights Show.
Music Strobe: Led + Color Flashing Lights Show. ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
တစ်ဦးတီးဝိုင်းဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ်နှင့်အတူပွဲတော်မှ Going? ထွန်းတောက်အရောင် screen နဲ့ LED lazer strobing အလင်းပြဖို့အဆင်သင့်ကိုရယူပါ။
တစ်အိပ်ဆောင်အတွက်မွေးနေ့၏ Electro ကခုန်အိမ်သူအိမ်သားပါတီပစ်? DJ သမားကို LED ဂီတ strobing Visual app ကိုနှင့်အတူစည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်။
စက်ဘီးလမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်ကားမောင်းနေစဉ်လမ်းအပေါ်တစ်ဦး Pulse တုန်ခါမှုတွေကြောင့်သုံးပါ။
ဒီ DJ သမားတစ် strobing အလင်းအခမဲ့ Pulse App ဖြစ်ပါတယ်။ စည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်ဒစ္စကိုပါတီအလင်းအိမ်, LED နှင့်မျက်နှာပြင်အရောင်တစ်မိုက်ခြင်းဖြင့်ဂီတစည်းချက်နှင့်ဆူညံသံနှင့်အတူအလင်းသက်ရောက်မှုထပ်တူပြုခြင်းမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်။
ဒါဟာပါတီဖြစ်ရပ်များ, ဖျော်ဖြေပွဲသို့မဟုတ်ပွဲတော်များများအတွက်အခမဲ့အော့ဖ်လိုင်း flash ကိုလေဆာရောင်ခြည်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်တအိမ်ပါတီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ဒစ္စကို Blink တွင်ဖွင့့်လျှပ်စစ်ရစ်သမ်အတွက်ခုန်တတ်ကြ၏။ အသံကျယ်ဆူညံသံများနှင့်တောက်ပ flickering မီးရှူးတိုင်အလင်းအိမ်နေဖြင့်အားကစားကွင်းပေါ်တွင်သင်၏ကဏ္ဍအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရယူလိုက်ပါ။
သင်တစ်ဦးအိပ်ဆောင် DJ သမားများမှာ အကယ်. : တစ်အိပ်ဆောင်အတွက်စည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်အီလက်ထရောနစ်ကခုန်အိမ်သူအိမ်သားပါတီမှာတိုင်းဖုန်းနှင့်တက်ဘလက် stroboscope တပ်ဆင်ရန်နှင့်ညှိ LED ဒစ္စကိုမီးလုံးကစားပြပါ!
မိုက်ကရိုဖုန်းအားဖြင့်အသံရဲ့စည်းချက်နှင့်အတူအလင်းအိမ် Visual ထပ်တူပြုခြင်းမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဂီတ LED ။
ဒါဟာအော့ဖ်လိုင်း strobing light app ကိုတစ်ဦး DJ သမားများအတွက်အခမဲ့ပါတီဂိမ်း LED ရဲ့။ ဒါဟာ stroboscopic ရစ်သမ်အလင်းသက်ရောက်မှုများအတွက်ကင်မရာနှင့်မိုက်ကရိုဖုန်းခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာစကားသံကိုသို့မဟုတ်ဂီတစည်းချက်အပေါ်အေးမြအရောင်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏ကင်မရာကိုတစ်ဦးမီးရှူးတိုင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင် LED ကိုမျက်တောင်ခတ်မည်မဟုတ်။ သင်အမြဲတစ်နိုက်ကလပ်သို့မဟုတ်အိမျတျောကို hip-hop ကခုန်ပါတီဖြစ်ရပ်အတွက်က hue မျက်နှာပြင်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုသုံးနိုင်သည်။
(paid) internal Visual ဂီတအလင်း mode ကိုစည်းချက်ဖမ်းတစ်မိုက်ခရိုဖုန်းကိုမသုံးပါဘူး။ ဒါဟာအများဆုံးကိရိယာများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ သင့်ရဲ့ device ကိုပြည်တွင်းရေးသွေးခုန်နှုန်း mode ကိုထောကျပံ့မပါဘူးဆိုရင်ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့်ပြန်အမ်းငွေရဖို့ပါ။
အလင်းအိမ်ဂီတ မှ flash လုပ်လုပ်နည်း
1. စာနယ်ဇင်း START!
3. ဆင်း (0-100) အထိပွတ်ဆွဲခြင်းအားဖြင့်လက်ရှိ sound volume ကိုများအတွက်မိုက် sensitivity ကို Set နှင့်
ဒီပါတီဒစ္စကိုအလင်းဂီတ app ကိုအတူ 4. အကအိမ်, hip-hop သို့မဟုတ်ဘဲလေး!
LED နှင့်အခါ sound volume ကိုထိပ်မျက်နှာပြင်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးမျက်တောင်ခတ်သည်။ ဒါကလမ်းပေါ်ကဘတ်စကက်ဘောအားကစားပွဲပေါ်အသံကျယ်ဆူညံသံများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်မွေးနေ့ရဲ့ကာရာအိုကေ strobing အလင်းအိမ်ပြသပါ။ ပါတီဒစ္စကိုမီးလုံးပျော်ရွှင်ခံစားပါ! တညဉ့်ကလပ်နိုက်နေစဉ်အရောင်စက်ဝိုင်းဘီးအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောပြောင်ပြောင်တောက်သောမူလတန်းအရောင်များသတ်မှတ်မည်။
တီးဝိုင်းရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ်တွေပေါ်ဂီတ strobing တပ်ဆင်ရန်နှင့်ကခုန်ကြမ်းပြင်ကျောက်ရန်သင့်ပရိတ်သတ်များကိုမေးပါ!
ကလေးတွေမွေးနေ့များအတွက်ဂီတအရောင်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးရှိုး Make (မျက်စိကွယ် lazer အယ်လ်အီးဒီကိုအသုံးပြုသည်သောမီးရှူးနှင့်အတူသတိဖြစ်) ။ သင်ဘလူးတုသ်စပီကာကိုသုံးနိုင်သည်, ဒါပေမယ့် app ကိုကလေးအသံသည်သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်ဘုံဘိုင်ပေါ်မှလက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ကခုန် hip-hop, စည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်တောင်မှဘဲလေး။
ဘောလုံးဂိမ်းမှာပွဲစဉ်မှယူနှင့်သင့်အားကစားအသက်တာ၌မီးလျှံတစ်နည်းနည်းထည့်ပါ။ ဘောလုံးဂိမ်းစဉ်အတွင်းအားကစားကွင်းအပေါ်မီးရှူးတိုင် stroboscopic ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပဲမျိုးစုံနှင့်အတူသတိပြုမိပါစေ။
Blink ဒစ္စကိုအလင်းအိမ် setting များကို:
* ပြင်ပမိုက်ရဲ့ / ပြည်တွင်းဖုန်းရဲ့အသံက
* LED လေဆာရောင်ခြည်:်/ ပိတ်မီးရှူးတိုင် flickering (ထိုသော့ခတ်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်သည်)
က hue color ကိုဘီး, Romantic stroboscope, ဘောလုံးဘောလုံးသို့မဟုတ်စတားမီးရှူးမီးပန်းများအနေဖြင့် * ရိုးရိုးတောက်ပမူလတန်းအရောင်များ
* အက hue ဘီးသို့မဟုတ် set ကျပန်းသက်တံ့ strobing ကနေလက်နှိပ်ဓာတ်မီးအရောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။
သင့်ရဲ့အကြီးအပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဒါဟာအေးမြပါတီဓာတ်မီး apps များစေခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ငါ့ကိုစိတ်အား!
သင့်ရဲ့တီးဝိုင်းရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ်တွေပေါ်ဂီတ strobing တပ်ဆင်ရန်နှင့်ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုကလစ်လုပ်ကိုမေးပါ။ တစ်အိပ်ဆောင်ပါတီအနေဖြင့်တစ်ဦးကိုဗီဒီယိုကို ယူ. ငါ့ထံသို့ပို့။
ငါ့ကိုနှင့်သင်၏ရုပ်ရှင် Share ခြင်းနှင့်လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်အထူးနှုန်းများ code ရ!
* သတိ! တောက်ပသည့် LED strobing light မျက်စိကွယ်သည့်အမြင်အာရုံအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, အချို့သောလူများအတွက်, က epileptic သိမ်းယူမှုစေခြင်းငှါ,!
Klaipedas အလင်းပြရန်ပွဲတော် : Flash ဖြင့် Video ပြပွဲအလင်းအိမ် www.VE.lt ပေးခဲ့ပါသည် LED
Music Strobe: Led + Color Flashing Lights Show. အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Music Strobe: Led + Color Flashing Lights Show. အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Music Strobe: Led + Color Flashing Lights Show. အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Music Strobe: Led + Color Flashing Lights Show. အား အခ်က္ျပပါ
jaaproductions စတိုး 61 32.47k
Music Strobe: Led + Color Flashing Lights Show. ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Music Strobe: Led + Color Flashing Lights Show. အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.11
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://plus.google.com/+AApptoday/posts/ALEd8hfbJb6
App Name: Music Strobe: Led + Color Flashing Lights Show.
Release date: 2019-06-04 15:33:20
လက်မှတ် SHA1: B9:AC:47:60:26:94:12:AE:68:49:CD:95:A6:7A:3A:64:24:07:47:1C
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Iryna Shakura
အဖွဲ့အစည်း (O): A-App
Music Strobe: Led + Color Flashing Lights Show. APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ